Dzimba Dzakafungidzirwa Zviri kutengeswa muSalt Lake City, Utah
Real Estate Listings: Residential homes Foreclosed Homes Utah Salt Lake City
Dzimba Dzakafungidzirwa in Salt Lake City
Dzimba Dzakafungidzirwa in Utah
Preforeclosure Property In Salt Lake City, Utah
Salt Lake City in Utah (United States), 84129
maonero Dzimba Dzakafungidzirwa Rakabudiswa 3 weeks ago
Foreclosed Homes in Salt Lake City, Utah
Salt Lake City (inowanzopfupikiswa kuSalt Lake uye yakapfupikiswa seSLC) ndiro guta guru uye ruzhinji rwematunhu eU.S. state yeUtah, uyezve nechigaro cheSalt Lake County, iyo inowanikwa vanhu vakawanda muUtah. Nenhamba inofungidzirwa ye200,591 muna 2018, guta iri musimboti weSalt Lake City metropolitan nzvimbo, iyo ine huwandu hwevanhu 1,222,540 (kufungidzira kwe 2018). Salt Lake City iri zvakare mukati meguta rakakura inozivikanwa seSalt Lake City-Ogden-Provo Combined Statistical Area, nzvimbo yemadhorobha yakasanganiswa yemadhorobha nekukura kwematunhu yakatambanudzirwa padivi remakiromita zana nemakumi mairi nemashanu (190 km) kweWasatch Front, huwandu hwe 2,606,548 (sekufungidzira kwa 2018). Ndiyo imwe chete yemaviri makuru emadhorobha muGreat Basin.Salt Lake City ndiyo dzimbahwe renyika reChechi yaJesu Kristu eRekupedzisira-zuva Vasende. Iro guta rakavambwa muna 1847 nevateveri vekereke, inotungamirwa naBrigham Young, avo vaitsvaga kupunyuka kutambudzwa kwavakange vasangana nako vachigara kure nekumabvazuva. Iwo mapiyona eMormon, sezvavanenge vava kuzozivikanwa, vakapinda mumupata wakaoma uye nekukurumidza vakatanga kuvaka, kuronga, nekuwedzera network yekudiridza iyo yaigona kupa huwandu hwevanhu uye kukurudzira kukura munguva yemberi. Salt Lake City's grid system inoenderana neyakajairwa gidhi gidhi chirongwa, ine kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweTemberi Square (iyo nzvimbo ine yeSalt Lake Temberi iri munharaunda yeSalt Lake City) inoshanda semavambo eSalt Lake meridian. Nekuda kwepedyo neRwizi rweSalt Great, guta raive rakanzi Great Salt Lake City. Muna 1868, 17th Utah Territorial Legislature yakadzora izwi rekuti "Hukuru" kubva kuzita reguta .Kufambiswa kwenhengo dzechechi dzese kuchechi, zvimbambaira, uye kuvakwa kweyekutanga njanji yekutanga yakatanga kuunza hupfumi, uye guta rakatumidzwa zita rekuti Crossroads of the West. Yakafambiswa neLololn Highway, yekutanga nzira ichipfuura, muna 1913. Migwagwa mikuru miviri yekuyambuka, I-15 uye I-80, zvino inosangana muguta. Guta zvakare raive nenzira yebhandi, I-215. Salt Lake City yakagadzira yakasimba yekubvakacha yevashanyi indasitiri yakanangana nekushingairira uye kwekunze nhandaro. Salt Lake City yakagashira gore ra2002 Olimpiki. Ndiyo nzvimbo yekubhengi yeUnited States.
Kufukura inzira yepamutemo yekuti mukweretesi aedze kudzosera mari yechikwereti kubva kune iye anokwereta, amira kubhadhara kune waanopa chikwereti, nekumanikidza kutengesa zvinhu zvakashandiswa semubvumirano wechikwereti.  Pakutanga, mukweretesi (mukweretesi), kana mumwe akwereta, anowana kubviswa kwemumwe mukweretesi (wechikwereti) 'kodzero yakaenzana yokudzikunurwa, kungave nematare edzimhosva kana mashandiro emutemo (mushure mekutevedzera yakatarwa nzira yemutemo). ] Kazhinji munhu anokweretesa anowana mubairo wekuchengetedza kubva kune waanokweretesa uyo anokwereta mari kana kuti anovimbisa chinhu senge imba kuchengetedza chikwereti. Kana mukweretesi akanganisa uye mukweretesi akaedza kudzosera zvinhu zvacho, matare ematare anogona kupa uyo anenge achikweretwa kodzero yakaenzana yekudzikunura kana anenge akweretesa akadzorera chikwereti. Ipo kodzero iyi yakaenzana iripo, iri gore pamusoro uye mukweretesi haakwanise kuva nechokwadi chekuti vanokwanisa kutora nzvimbo yacho zvakare. Naizvozvo, kuburikidza nehurongwa hwekuzviratidza, iye anokweretesa anoedza kufumura (muchirungu chakajeka, nekukurumidza kumisa) kodzero yakaenzana yekudzikunura uye kutora zvese zviri pamutemo uye zvakaenzana zita kune iyo nzvimbo mumubhadharo uri nyore.  Vamwe vanobata vanokwanisa kufembera kodzero yemuridzi wekudzikunura zvimwe zvikwereti, senge dzemitero yakawandisa, mari dzemabhadharisi dzakabhadharwa kana kudarika vanobatana nevaridzi veimba.